Flat imaskhi Machine abakhiqizi futhi Suppliers - China Flat imaski machine Factory
I-China Servo Mask Machine Supplier Flat Face Mask Machine Amafektri umshini wokukhiqiza imaski oyisicaba
Lo mugqa wokukhiqiza uwumshini wemaski othomathikhi ozenzekelayo ngokuphelele, umshini womzimba owodwa ushayela umshini owodwa we-earband.
Ngemuva kokuthi umshini omkhulu womzimba ukhiphe umzimba wesifihla-buso, ishidi lomzimba lesifihla-buso lidluliswa yisakhiwo sebhande elihambayo phezulu kwepuleti lokuqala lobuso ngaphambili komshini webhande lendlebe, futhi ekugcineni ishidi lesifihla-buso lifakwa kupuleti lobuso umshini webhande lendlebe ngokucindezela i-servo motor. Umshini we-earband uqedela ukufakwa nokugoqwa kwamabhande endlebe yesifihla-buso, Ukuze uqedele ukukhiqizwa komkhiqizo wesifihla-ndlebe.
Umshini wokukhiqiza we-OEM Manual Mask umshini wokukhiqiza umshini ophakeme wejubane eliphakeme
usike ngokuzenzakalela bese ushisela i-earloop emzimbeni womaski, usebenzisa ama-servo motors ayisishiyagalombili, ijubane lifike ezingcezwini ezingama-80-120 / min, kusetshenziswa ikhanda lesikwele lendawo yesikwele, indawo yokushisela indawo inembile futhi iqinile, isakhiwo esilula, ukusebenza kuzinzile.
Futhi ukusetshenziswa kwe-fan enkulu yokukhipha okukhulu, ukushabalalisa ukushisa okusheshayo, ukuqinisekisa ukuzinza kwe-welding ye-ultrasonic.